အငှားယာဉ်အဖြစ်၊ Grab တွဲဖက်ယာဉ်မောင်းအဖြစ် စာရင်းသွင်းပါ
ခရီးလမ်းကြောင်းတူတဲ့ ခရီးသည်အချင်းချင်း ချိတ်ဆက်ပေးတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ပထမဆုံး အငှားယာဉ်ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ GrabShare နဲ့ မောင်းနှင်ရင်း ပိုကောင်းတဲ့ဝင်ငွေတွေ ဖန်တီးလိုက်ပါ။
GrabShare ဆိုတာ လမ်းကြောင်းတူညီသော ခရီးသည်တွေကို ခရီးစဉ်တစ်ကြောင်းထဲမှာတင် ဘွတ်ကင်နှစ်ခုနဲ့အထက် လက်ခံနိုင်ပြီး၊ တူညီတဲ့ လောင်စာဆီပမာဏနဲ့ အချိန်တွေကို အသုံးပြုပြီး မိမိရဲ့ ဝင်ငွေတွေကို ပိုမိုတိုးမြှင့်လာနိုင်စေမယ့်အစီအစဉ် ဖြစ်ပါတယ်။ ခရီးစဉ်အတွက် ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့ လမ်းကြောင်းအခြေအနေအမျိုးမျိုးရှိပြီး အဲ့ဒီလို အခြေအနေတွေကတော့:
GrabTaxi ယာဉ်မောင်းအားလုံးဟာ GrabShare ခရီးစဉ်တွေကို အလိုအလျောက်ရလက်ခံရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ တူညီတဲ့ ခရီးစဉ်တွေကနေ ဝင်ငွေတွေ ပိုမိုရရှိစေမှာပါ။
ကနဦးအစအနေနဲ့ GrabShare ကို ရန်ကုန်မြို့မှာသာ ရရှိနိုင်မှာပါ။
GrabShare နဲ့ မောင်းနှင်ပြီး ရရှိနိုင်တဲ့ အကျိုးအမြတ်များစွာရှိပါတယ်။
လမ်းကြောင်းတူ ခရီးသည်များမှ ခရီးစဉ်တစ်ခု ထက်မကလက်ခံနိုင်ခြင်း
ခရီးစဉ်တစ်ကြောင်းတွင် ခရီးသည်၂ဦးသာစီးလို့ရတာမို့လို့ မိတ်ဆွေတို့ကားပေါ်တွင် နေရာများပိုခြင်း
ဝင်ငွေများများရရှိနိုင်ခြင်း – Grabshare ဖြင့်ရရှိထားသော ခရီးစဉ်တိုင်းဟာ Weekly Incentive ထဲမှာပါဝင်မှာဖြစ်လို့ အပိုဆုကြေးများရရှိနိုင်ပါသည်။
GrabShare ရဲ့ အဓိက လုပ်ဆောင်ချက်များ
ခရီးစဉ်တစ်ကြောင်းတည်း ရရှိမည့်အစား ခရီးစဉ်များ ပိုမိုရရှိနိုင်ခြင်း
ခရီးစဉ်တစ်ခုတွင် အများဆုံး ခရီးသည် ၂ဦးသာ ပါဝင်နိုင်ခြင်း
GrabTaxi ကဲ့သို့ပင် တူညီသော Acceptance Rating, Cancellation Rate နှင့် Driver Rating များ ရှိခြင်း
GrabTaxi နှင့် GrabShare ဘာကွာခြားလဲ?
လမ်းကြောင်းတူညီ၊ အချိန်တူညီသော ဘွတ်ကင်နှစ်ခုနဲ့ အထက် ရရှိနိုင်သည်။
တစ်ကြိမ်မှာ ဘွတ်ကင်တစ်ခုသာ လက်ခံနိုင်မည်။
ဘွတ်ကင်တစ်ခုတွင် အများဆုံး ခရီးသည် ၂ဦးသာ ပါဝင်နိုင်သည်။
ခရီးစဉ်တစ်ကြောင်းတွင် အများဆုံး ခရီးသည် ၄ဦးသာ စီးနင်းနိုင်သည်။
Job card တွင် အပြာရောင်အမှတ်နှင့် “GrabShare” ဟု ဘယ်ဘက်ထိပ်တွင်ဖော်ပြထားမည်။
Job card တွင် ခဲရောင်အမှတ်နှင့် “GrabTaxi” ဟု ဘယ်ဘက်ထိပ်တွင်ဖော်ပြထားမည်။
App ကိုယုံကြည်စ်ိတ်ချပါ။ – Grab App မှာ လမ်ခရီးတစ်လျှောက် အကိုက်ညီဆုံး လမ်းကြောင်းတွေကို ရွေးချယ်ပြီး ချထားပေးသွားမှာပါ။
စောင့်ဆိုင်းချိန် ၃ မိနစ် ယာဉ်မောင်းအနေနဲ့ ခရီးသည်တွေကို Pick up point ရောက်တဲ့အခါ ခရီးသည်တွေကို စောင့်ဆိုင်းချိန် ၃မိနစ်သာ ရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
"GrabShare" အပွာရောငျနောကျခံနဲ့အလုပျကဒျ၏ထိပျပျေါတှငျပျေါလာပါလိမျ့မယျ။ သငျကကောကျအခကျြမွငျလိမျ့မညျ။
သင့်အနေနဲ့ ဒုတိယမြောက် ဘွတ်ကင်က ပထမခရီးသည်ကို Pick-up မလုပ်ခင်၊ သို့မဟုတ် Pick-up လုပ်အပြီးမှာ ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒုတိယခရီးသည်အတွက် ဘွတ်ကင်အသစ်ကို ထပ်မံ လက်ခံရမှာပါ။
ခရီးသည်ကို Drop-off လုပ်ပြီး ခရီးစဉ်ကြေးရယူတဲ့အခါ ဘယ်မှ ညာအတိုင်း ခရီးစဉ်လမ်းကြောင်းအတိုင်း လိုက်နာပါ။
GrabShare အလုပ်တွေအတွက် အပိုဆုကြေးရရှိမှာလား?
ဟုတ်ပါတယ်၊ GrabShare ခရီးစဉ်တွေမှာ သင့်ရရှိမယ့် Incentive တွေကို ထည့်သွင်း ရေတွက်ထားပါတယ်။ အကယ်၍ Grabshare ခရီးစဉ်မှာဘွတ်ကင်တစ်ခုသာရရင် ကော်မရှင်း ၅၀ရာခိုင်နှုန်းပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
GrabShare ကို ဖုန်းထဲမှာ ဘယ်လို ထည့်သွင်းရမလဲ?
GrabShare ကို ထည့်သွင်းဖို့ ဘာမှ လုပ်စရာမလိုပါဘူး၊ မိတ်ဆွေယာဉ်မောင်းများ၏ GrabDriver App ထဲမှာအလိုလျောက်ပေါ်လာမှာပါ
GrabShare အတွက် Payment တွေကို ဘယ်လို ရယူရမလဲ?
GrabShare ဟာ GrabTaxi နဲ့ တူညီတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေပဲ ရှိမှာပါ၊ GrabTaxi တွင် ကောက်ခံရမည့်ငွေကိုဖော်ပြသလိုပဲ GrabShare တွင်လည်း ထိုသို့ ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
GrabTaxi ကနေ GrabShare ကိုဘယ်လို ပြောင်းမလဲ?
ပြောင်းစရာမလိုပါဘူး။ အလုပ်လက်ခံရာနေရာမှာ ဘယ်ခရီးစဉ်က GrabShare ဘယ်ခရီးစဉ်က GrabTaxiဆိုတာကို ခွဲခြားနိုင်မှာပါ
GrabTaxi နဲ့ GrabShare တို့အတွက် Wallet တွေကို ခွဲပြီးသုံးရမှာလား
မလိုပါဘူး၊ ယာဉ်မောင်းအားလုံးမှာ ရှိတဲ့ Grab ရဲ့ Cash နဲ့ Credit Wallet တွေနဲ့ပဲ အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ယာဉ်မောင်းတွေအတွက် ငွေအလွဲအပြောင်း အားလုံးက အတူတူပါပဲ။
တကယ်လို့ ပထမဆုံး GrabShare ခရီးသည်က လမ်းကြောင်းတူတဲ့ နောက်ထပ်ခရီးသည်ကို ထပ်လက်မခံဖို့ ပြောရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ?
GrabShare ဘွတ်ကင်ဟာ ခရီးစဉ်တစ်ကြောင်းကို အတူတကွ မျှဝေစီးနင်းဖို့ဖြစ်ပြီး ဘွတ်ကင်တွေကို လျစ်လျူရှုလို့မရကြောင်း အသိပေးပါ။ တကယ်လို့ ခရီးသည်က ဆက်လက်ငြင်းခုန်နေတယ်ဆိုရင် ခရီးစဉ်အဆုံးထိ လိုက်ပို့ပေးပြီး ခရီးစဉ်အတွက် Rate လုပ်တဲ့နေရာမှာ “ခရီးစဉ်မျှဝေ မစီးနင်းလိုခြင်း” လို့ ရေးသားပြီး ခရီးသည်ကို Grab ထံ တိုက်ရိုက်တိုင်တန်းနိုင်ပါတယ်။
GrabShare ဘွတ်ကင်တွေမရရှိအောင် ရွေးချယ်နိုင်မလား?
မရနိုင်ပါဘူး၊ GrabShare ဘွတ်ကင်တွေလက်ခံဖို့ ငြင်းပယ်ခဲ့ရင် သင့်ရဲ့ Acceptance Rate ကို ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။
တကယ်လို့ GrabShare နဲ့ ဘွတ်ကင်နှစ်ခုရရမယ့်အစား ဘွတ်ကင်တစ်ခုထဲ ရခဲ့ရင် ဈေးနှုန်းကို ဘယ်လိုပြန်ညှိပေးမှာလဲ?
App မှာ ပြထားတဲ့ ဈေးနှုန်းဟာ နောက်ဆုံးဈေးနှုန်းဖြစ်တာကြောင့် ဈေးနှုန်းပြန်လည်ညှိနှိုင်းပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ GrabShare ဘွတ်ကင်နဲ့ လမ်းကြောင်းတစ်ကြောင်းသာ ရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ Grab ကနေ ၅၀% ကော်မရှင် ပြန်လည်ပေးအပ်သွားမှာပါ။
တူညီခရီးစဉ်မှာ ခရီးသည် Cancel လုပ်ဖို့အတွက် ဘယ်လောက်စောင့်ရမလဲ?
ဘွတ်ကင်တစ်ခုအတွက် ၃မိနစ်သာ စောင့်ဆိုင်းပေးရမှာပါ။ ဒါက GrabTaxi မှာ ငါးမိနစ် စောင့်ရတာနဲ့ ကွာခြားသွားတဲ့ အချက်တစ်ချက်ပါ။
ယာဉ်မောင်းရဲ့ Credit Balance ထဲကနေ ဘယ်လောက်ကော်မရှင်ယူမှာလဲ?
GrabTaxi နဲ့ ကော်မရှင်နှုန်းထား အတူတူပါပဲ။
တကယ်လို့ မတော်တဆ ဒုတိယမြောက်ဘွတ်ကင်ကို လက်မခံမိ၊ Cancel လုပ်မိရင် ကျွန်တော့်အနေနဲ့ အခြား တူညီတဲ့ ဘွတ်ကင်ရနိုင်သေးလား?
ရနိုင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် သင့်ရဲ့ AR နဲ့ CR တွေကို ထိခိုက်နိုင်တာကြောင့် သင့်အနေနဲ့ App ကို သတိထားကြည့်နေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
တကယ်လို့ ဒုတိယမြောက်ဘွတ်ကင်ရဲ့ ခရီးသည်က Cancel လုပ်လိုက်ရင် ၅၀% ကော်မရှင် ပြန်ရနိုင်သေးလား?
ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ ခရီးစဉ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုထဲ ရတာနဲ့ အတူတူပါပဲ။ ခရီးစဉ်ပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါ ကော်မရှင်တစ်ဝက်ကို ပြန်လည် ပေးသွားမှာပါ။
တကယ်လို့ ဒုတိယမြောက်ဘွန်ကင်က Cancel လုပ်သွားရင် ပထမခရီးသည်ရဲ့ ဈေးနှုန်းကို ညှိနှိုင်းပေးဦးမလား?
မညှိနှိုင်းပေးပါဘူး၊ ပထမခရီးသည်ရဲ့ ခရီးစဉ်ကြေးဟာ နဂိုအတိုင်းရှိနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမတူညီတဲ့ ခရီးစဉ်လမ်းကြောင်းတွေအတွက် ကော်မရှင်တစ်ဝက်ကို ပြန်ပြီး Top Up လုပ်ပေးမှာပါ။
ဘွတ်ကင်တစ်ခုအတွင်း ခရီးသည် ၂ဦးထက်ပိုမိုပါဝင်လာရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ?
GrabShare ဘွတ်ကင်နဲ့ ခရီးစဉ်အတွင်း ခရီးသည် အများဆုံး ၂ဦးသာ တင်ဆောင်ခွင့်ပြုထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခရီးသည်ကို GrabShare ခရီးစဉ်ကို Cancel လုပ်ပေးပြီး GrabTaxi သာ ငှားရမ်းဖို့ အကြံပြုပါ။
ဒုတိယမြောက်ဘွတ်ကင်ဟာ ပထမမြောက် ခရီးသည်ကို Pick-up မလုပ်ခင်နဲ့ Drop Off မချခင် ဘယ်နေရာကမဆို ဝင်လာနိုင်ပါတယ်။
App ကပေးထားတဲ့ Pick-up နဲ့ Drop-off အစီအစဉ်အတိုင်း မလိုက်နာပဲ မောင်းနှင်လို့ ရနိုင်လား?
GrabShare ခရီးစဉ်တွေမှာ App ကပေးထားတဲ့ Pick-up နဲ့ Drop-off အစီအစဉ်အတိုင်းသာ လိုက်နာရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွက် Grab ရဲ့ System ကနေ အကောင်းဆုံးနဲ့ အချိန်အတိုဆုံး ခရီးလမ်းကြောင်းတွေကို ရှာဖွေပေးထားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ခရီးသည်တွေကိုလည်း ယာဉ်မောင်းရဲ့ Grab App က ပေးထားတဲ့အတိုင်း မောင်းနှင်တဲ့ Pick-up/Drop-off လမ်းကြောင်းကို လိုက်နာဖို့ အကြောင်းကြားထားမှာပါ။ App ကို ယုံကြည်ပါ!